Maki Martech Zone
Tag: zvipenyu zvipenyu
Maitiro Ekugadzira Zvinotaridzika Zvinoonekwa zve Instagram Nhau
NeChishanu, Gunyana 18, 2020 Mugovera, Gunyana 19, 2020 Hardik Oza
Instagram ine vanopfuura mamirioni mazana mashanu vashandisi vanoshanda zuva rega rega, zvinoreva kuti hafu yenguva yese yevashandisi base Instagram kuona kana kugadzira nyaya mazuva ese. Instagram Nyaya ndedzimwe dzakanakisa nzira dzaungashandisa kubatana neako tarisiro vateereri nekuda kwayo anoshamisa maficha anogara achichinja. Zvinoenderana nehuwandu, makumi matanhatu neshanu ezviuru ezviuru zvemamirioni vanoti vanoona Instagram Nhau Nenhamba yepamusoro yevashandisi vanotevera shamwari, vanozivikanwa,
10 Zvemukati Zvimiro Vashambadziri Havagone Kubhadhara Kuti Varege
Chipiri, August 9, 2016 China, August 11, 2016 Michael Korsunsky
PaMGID, tinoona zviuru zvemashambadziro uye tinoshandira mamirioni eazvo mwedzi wega. Isu tinoteedzera mashandiro eshambadziro yega yega yatinoshandira uye tinoshanda nevashambadziri nevaparidzi kugadzirisa mameseji. Ehe, isu tine zvakavanzika izvo zvatinogovana chete nevatengi. Asi, pane zvakare akakura emifananidzo mafambiro atinoda kugovana nemunhu wese anofarira kushambadzira kwemuno, netarisiro yekubatsira iyo indasitiri yese. Heano gumi akakosha maitiro ari
Tuesday, August 9, 2016 Thursday, August 11, 2016
Uri Wako Leveraging Pinterest yeMafoni?
Svondo, Nyamavhuvhu 3, 2014 Mugovera, Kukadzi 4, 2017 Douglas Karr
Sezvakaita newebhu, email uye angangoita mamwe marongero - vatengesi vanofanirwa kutora nhare vachifunga sezvavanogadzira, kuratidza uye kugovana zvirimo pane yavo saiti, mameseji uye kuburikidza nemamwe mapuratifomu. Imwe chikuva ine hunyanzvi hwekuvapo ndeyePinterest. Iyo Pinterest yekushandisa nhare yakadhonzwa mamirioni enguva uye inoramba ichive yakakurumbira yekutsvaga chikuva. Muchokwadi, 3 pa4 vashanyi kuPinterest iri pane mbozhanhare
Sunday, August 3, 2014 Saturday, February 4, 2017